SIDA LOO ILAALIYO DIGIRTA GURIGA: 2 CUNTO FUDUD OO JIILAAL AH - AWOODA
Ugu Weyn Ee Awooda
Sida loo ilaaliyo digirta cagaaran ee guriga: raashinka sawirrada jiilaalka
Xilliga Cuntadu waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee nolosha hooyooyinka: waxaa jira waxyaabo badan oo la sameeyo si loo badbaadiyo in la sheego in qoyskaaga la siiyo ugu badan ee pickles jiilaalka, iyo roogagga qolalka kaydka ah waxaa lagu xiraa awoodda leh noocyada kala duwan ee wanaagsan. Maqaalkani waxa aanu eegaynaa laba cuntooyin fudud oo loogu talagalay karinta digirta cagaaran ee cagaaran, taas oo kugu farxi doonta fududayntooda iyo xawliga fulinta, natiijooyinkuna maaha kuwo ka baxsan cid ka tagta. Sidaa darteed, waan fahmi karnaa.
Sida loo ilaaliyo digirta xilliga qaboobaha: qariirad caadi ah
Oo marka hore waxaan u fiirin doonaa qariirada classic for miro digir qasacadaysan.
Waa muhiim! Si aad u diyaarisid manhajkan waxa aad u baahan tahay inaad isticmaasho bislaanshaha caanaha. Waa tilmaan sidan ah oo miro ah oo u oggolaanaya in uu ahaado mid casiir leh oo jilicsan oo jilicsan. Haddii aad isticmaasho digir badan oo bislaado, ka dibna salting waxay noqon kartaa mid engegan oo adag.
600 garaam oo digir cagaar ah;
1 tbsp. beedka milixda;
1 tbsp. qaaddo sonkorta;
100 ml oo ah 9% acetic acid;
1 litir oo biyo ah oo marin ah.
Sidoo kale jiilaalka aad diyaarin kartaa yaanyada cagaaran, dill, boqoshaada caano, boletus, isbinaajka iyo basasha cagaaran.
Dhammaan digirta waa in la nadiifiyaa si taxadar lehna loo hubiyaa dhaawaca farsamada.
U hubso inaad ku tirtirto digirta adigoo ku jira biyo qabow. Marka xigta, digirta nadiifka ah u dir digsiga, ka dibna ku shub biyo qabow, kaas oo si buuxda u dabooli doona digirta. Isku day dabka oo sug sug. Inta lagu guda jiro habka karkaraya xumbo ayaa la sameyn doonaa, taas oo qasab ah in laga saaro qaado. Sidaa daraadeed, qashinka soo haray, oo laga yaabo in aad seegtay marxaladaha hore ee diyaarinta, ayaa la saaraa xumbo.
Isla markiiba karkarinta ka dib, yareeyso kulaylka si digirta loo yareeyo kuleylka hooseeya oo ha ka daadin digsiga. Ku kari miro sidan ah 10-15 daqiiqo (haddii aad dooranayso digir dhalinyaro ah, 10 daqiiqo oo karkaraya waxay ku filnaan doontaa, haddii aad isticmaasho waayeelka, markaa kiiskan isticmaal 15 daqiiqadood).
Inkastoo digirku karkariyo, waa inaad sameysid marinade. Ku dar qaado qaado sonkor ah iyo qaado oo cusbo ah ilaa litir biyo ah. Waxaan keennaa marinade si karkariyo oo sug ilaa sonkorta iyo milixda, kala-gooyaan marmar. Ha iloobin inaad dib ugu noqotid digsiga oo ah digir iyo ka saar xumbada.
Marka wakhti karkarinta wakhti la dhammaystiro, ka saar digsiga kuleylka iyo biyaha daadi caarada.
In barmooyinka pre-jeermiska, faafin digir kulul. Waxaa muhiim ah in aadan buuxin bacaha hoostiisa hoostiisa. Waxaa fiican inaad ka tagto farqiga dhowr mitir oo cabbir ah (waxaad ku dhajin kartaa dhumucda fartaada).
In marinade karkaraya, ku dar 100 ml oo ah 9% khal. Keen marinade mar kale karkari, ka dibna ka dhig meel ka fog kariyaha.
Marinade la karkariyey ku shub dhammaan digirta dhalooyinka. Ku xir xargaha oo waxaad u dirtaa dhalooyinka loogu talagalay nadiifinta.
Qeybta hoose ee digsiga, taas oo la nadiifin doono, ku rid shukumaan jikada ama maro si aad uga hortagto gasacadaha in ay qarxaan marka karkaraya. Buuxi biyo diirran (waa muhiim in heerkulka heerkulka uusan jebin kusaddii). Heerka biyaha waxaa go'aaminaya gasacadaha khadka. Isla markaa waa inaadan daboolin daboolka si aad u xiran si hawada uga maqnaato meel aad ku tagto. Biyaha ku soo qaado karkar, ka dibna nadiifin muddo 15 daqiiqo ah.
Wakhtiga ka dib, ka saar dhalooyinka iyo adkee daboolka si adag. Isticmaal maro ama tuwaalo si aad isaga ilaaliso gubashada.
Fiiri xakamaynta ee suurtagalka ah, dibna u rogaya hoos. Haddii biyuhu aanay ka soo daboolin daboolka, waxa loola jeedaa inaad si sax ah u samaysay.
Duufaanta kuleylka ah waxay ku nadiifinayaan shukumaan ama buste diiran. Sug ilaa ay ka buuxaan. Marka tani dhacdo, salting waxaa lagu keydin karaa heerkulka qolka.
Video: sida loo ilaaliyo digir cagaaran xilliga jiilaalka
Ma taqaanaa? Pea - warshad inta badan lagu isticmaalo munaasabadda xafladaha. Awowgeennu waxay aamminsan yihiin in miro dhir ah, dushooda iyo qaybaha ay ka qayb qaataan bacriminta xoolaha, dalagyada beeraha iyo barwaaqada guud ee dhaqaalaha.
Digirta cagaarka ah ee guriga iyada oo aan la nadiifin
Qodobka labaad waa wax lagu kariyo digir qasacadaysan oo guriga ah iyada oo aan la haynin jeermis dheeraad ah. Cuntadani way fududahay, sababtoo ah waxay ka maqan tahay shayada ugu dambeysa ee la xidhiidha karkarinta dheeraadka ah ee hore loo soo buuxiyay gasacyada.
Hase yeeshee, dhammaan jaangooyooyinka muuqda marka hore, sida salting sida sidoo kale waxay u baahan tahay waqti iyo ilaalin taxaddar ah ee tilmaamaha adiga, sababtoo ah iyada oo aan sterilization dheeraad ah, bangiyada si fudud u qarxi karaa haddii technology-ka loo soo saaray lama xisaabtanka.
Isku day inaad cuntid caleenta, sorrel, tufaaxa, juuska, juuska, juuska, basbaaska, digirta cagaaran, ukunta, dhoobo, dhir, dhir, kareem, tamaandho, juus ah, juus ah, tufaax, jeeriga, blueberries, xilliga qaboobaha. .
1 litir oo biyo ah oo marinade ah;
50 g oo cusbo ah;
50 garaam oo sonkor ah;
1 tsp sitric acid
Waa muhiim! Inta lagu jiro diyaarinta khudradda this ka dib markii daadinta digir ee marinade karkaraya, kareyso dheeraad ah lama ogola. Laga bilaabo xilligaas, waxaad dherjin kartaa dheriga biyo. Isla mar ahaantaana, marinade waa inuu si buuxda u daboolaa dhammaan digirta.
U hubso inaad ku tirtirto digirta adigoo ku jira biyo qabow.
Hadda waa inaad samaysaa diyaarinta marinade. 1 litir oo biyo ah (waxaad isticmaali kartaa biyo karkarin si degdeg ah si aad u dhaqaajiso habka) waxaad u baahan doontaa 50 g (3 tbsp L.) Sonkorta iyo milixda. Digsiga saliida dabka ku shub, u qaado karkariyo oo gebi ahaanba milixda sonkorta iyo milixda, kareyso marmar.
In marinade karkariyo ku dar digir diiray oo la dhaqay. Hadda lama isku dari karo.
Ka tag daboolka daboolka ilaa ay ka dhalato. Marka marinade leh miro ay ku karkarisay, digsi digada si aad u hubiso lakabka digirta labiska. Ka dib markaa, yareeyso kuleylka kana bax miro digir ah si aad u kari karto qiyaastii 15-20 daqiiqo, taas oo ku xidhan heerka xajmiga miraha aad doorato. Inta lagu jiro karkarinta, dheriga waa in si joogto ah loo ruxruxo si aanay digirta u wada dhicin. Mucaaradka jaban ayaa u baahan doona in laga saaro.
Diyaarinta digirta waa in lagu hubiyaa imtixaanka. Qaado hal digir oo leh qaaddo ka kooban hal-karinta, qabow oo isku day. Beeruhu waa inuu jilicsan yahay, laakiin ha ku guranin boqoshaada.
Dhammaadka wakhtiga cunto kariska oo dhan, ku dar 1 qaado shaah ah aaladda aan lakala saari karin marinade. Iska ilaali kaliya adigoo ruxaya dheriga.
In barmooyinka pre-jeermiska, soo dir digir iyo weheliyaan marinade ah. Waxaa muhiim ah in la fiiriyo muddada u dhexeysa daboolka (qiyaastii 1.5-2 sentimitir). Way ku habboon tahay in la doorto digirta cayayaanka yar yar. Isla mar ahaantaana, marinade waa inuu dabka ku sii jiraa si uu u karkariyo wakhtiga daadinta. Ka dib markii dhalooyinka la soo saaro miraha digirta, waxay ka buuxsameen brine karkaraya (ma gaari karo geeska awood of 1.5-2 centimeters, laakiin daboolaya dhan ee digir).
Hadda ku shub bangiyada leh furayaasha nadiif ah (taas oo ah, la kariyey biyo 10-15 daqiiqo).
Duufaanta kuleylka ah waxay ku nadiifinayaan shukumaan ama buste diiran. Sug ilaa ay ka buuxaan. Marka tani dhacdo, salting waa in lagu keydiyo mid ka mid ah Maqsin ama qaboojiyaha, tan iyo salting dheeraad ah ee salting oo dhan ee la karinayo aan la fulin.
Video: sida loo ilaaliyo digirta aan lahayn nadiifinta
Ma taqaanaa? Asalka halyeeyada cagaaran waxay la xiriirtaa ilmada Adam iyo Maryaniga Virgin. Markii Ilaah dadka ku ciqaabay denbiyadooda gaajada, hooyadii Ilaah way ooyday, ilmadeediina waxay u beddeleen digir. Sida laga soo xigtay halyeeygii kale, markii Adam, oo laga saaray jannada, ayaa dhulka ugu duubay markii ugu horraysay, ayuu ooyay, iyo meeshii ilmuhu ku dhacay, digirta koray.
Digir cagaaran, oo ku dhex jira guriga iyagoo gacmahooda iska leh, waxay noqon doonaan nafo-habeeyn heer sare ah markaad cunto karisato, maraqa, ama si fudud oo ah saxan cajiib ah ee suxuunta kala duwan.
Sidaa darteed, xaalad ay martidu mar hore ujoogaan, ma aad fuuli doontid sababtoo ah ma haysatid walxadan, taas oo ay ku jirto saladhyo iyo suugo aad u jecel. Waad ku mahadsan tahay cuntooyinka fudud ee fudud oo aad u fudud, waxaad ku kaydsan kartaa digirta cagaaran ee cagaaran xilliga jiilaalka. Hadda oo wax walbana waa adiga: iskuday, wax karsan oo aad ku raaxaysataan miraha cajiibka ah ee shaqadaada!
Cuntadan waxaa la siiyay aniga hooyo soddogan dhowr sano kahor, taas oo aan shakhsi ahaan u isticmaalo sannad kasta. Cuntada aadka u fudud oo sahlan oo fudud oo la isku qurxiyo sonkorta.
Marinade Tani waxay ku dhowaad 5 litir litir litir ah.
Wixii marinade waxaad u baahan tahay:
-1 litir oo biyo ah;
-150 garaam oo 8% oo khal.
-30 garaam oo cusbo ah (ama, si fudud, 1 qaado oo cusbo ah oo aan lahayn sariir).
Iska dhaaf biyaha, ka dibna ku shub cusbo, ku shub qandho, isku kari ah.
Diyaarso digirta, sababtoo ah waxaan ka nadiifinaa digir ka soo jilicsan, biyo raaci biyo. Ka dibna ku shub biyo karkaraya, ku kari ilaa 5 daqiiqo, ka saar biyaha, ka daadi dusheeda iyo adkee. Ku dabool digirta nadiifinta nus litir oo nadiif ah, ku shub karkarinta marinada si markaa digirta loo daboolo marinade, dabool leh dabool iyo nadiifin heerkul ah 100 digrii qiyaastii 40-50 daqiiqo. Ka dib marka la nadiifiyo, waxaan isku rogaa daboolka waana taas!
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Awooda 2019